Army kamafurashi jira
Army musango kamafurashi jira
Army gwenga kamafurashi jira
Army pfumbu kamafurashi jira
Army chando kamafurashi jira
Navy kamafurashi jira
Navy musango kamafurashi jira
Navy Marine kamafurashi jira
Airforce kamafurashi jira
Armed simba kamafurashi jira
Border murindi kamafurashi jira
New Style kamafurashi jira
Shinda polyester jira
Yunifomu & workwear jira
Twill / Drill / Sateen jira
Oxford / Cordura jira
Poplin / hembe jira
yunifomu Prison jira
Military / Police yunifomu
Military kamafurashi yunifomu
Miltary yunifomu / bhachi
Military / Police bhurukwa
Police bhachi / yunifomu
tinogona kuwana muenzaniso kuti bhuku?
Kufara kutumira chete kana zvakafanana ivhu mumaoko nokuda free.New vatengi vanofanira kubhadhara anotaura yechikoro, achaita dzosera kana nzvimbo kutongwa murayiro; kana vanoda chete mharidzo sezvo yourrequired, vanofanira kubhadhara zvakabudiswa nokuchengeta, kana nzvimbo imwe sezvakarayirwa hombe kugadzira, achaita dzosera mutariri uyu.
Rinhiko achava zvangu vakagadzirira zvacho?
Siyana Specification micheka vane deliver.As akasiyana dzose, 15-25 basa mazuva.
Zvakadini MOQ wako?
Zvikurukuru 2000m micheka. (Kunze dzinokosha nokurondedzerwa ose micheka)
Sei nokukurumidza ndinogona kuwana mutengo mazwi?
Muchataura iwe pakarepo, kana ukasarudza yedu zvinhu, zvino mashoko mutengo rimwe kushanda zuva maererano nezvaidiwa wako.
Chii mazwi ako makurukuriro?
T / T kana L / C pa kuona.
Chii chiputiriso rako?
Micheka: Mumwe mupumburu mumwe polybag, uye kunze nokudzitira PP Bag. Uyewo couldaccording yako requirement.For yunifomu, iine imwe polybag, uye ose 20 anogadza rakazara muna imwe atorwa. Uyewo aigona maererano nezvaidiwa wako.
How kuzosimbisa unhu pamberi murayiro?
Tinogona kukutuma vakasununguka mharidzo yatiri anowanikwa kuongorora yenyu. Kana kutumira mimwe dzenyu kwatiri, tichakwira kuti pakaunda yokuenzanisira wako mvumo vasati muhurongwa.
Kugadzirisa unhu matambudziko pashure rokutengesa?
(1) Tora mapikicha nematambudziko uye kutumira kwatiri.
(2) Tora mavhidhiyo nematambudziko uye kutumira kwatiri.
(3) Tumai shure kwomuviri dambudziko micheka kubudikidza achitaura kuna us.After isu kuzosimbisa nematambudziko, akadai anokonzerwa muchina, värjäys kana kudhindwa, etc, Mumazuva matatu, tirikwevere akakwidza kugutsikana chirongwa kwamuri.
NO.910-911, Caizhi Chivako, Deartown, Shaoxing City, Zhejiang Province, China
Chii zvinhu ndiyo kamafurashi suit akaita ...